Isu tinoziva zvimwe zvakawanda nezve interface yeiyo iPhone X | IPhone nhau
Isu tinoziva zvimwe zvakawanda nezve iyo iPhone X interface
Jesu anotema | | IPhone nhau, iPhone X
Sezuva rekuvhura idzva iPhone X wedzera chishuwo chekuziva zvimwe zvinhu zveiyi shanduko iPhone iyo Apple inopemberera yayo gore regumi.
Ichokwadi kuti mukuburitswa kweiyo iPhone X taigona kuona zvakanyatsonaka ruzivo rwekuti chishandiso ichi chichava sei, asi isu tinoda kutarisa pane mamwe maratidziro eiyo interface isina kutaurwa zvakadzama uye iri kunakidza chaizvo.
Tichatarisa pazvinhu zvitatu zvakakosha zveiyo nyowani iPhone iyo inosiyana zvachose nemadzitateguru ayo iPhone. Aya maitiro ndeaya: skrini yepamusha, yakavharwa skrini uye inodzora nzvimbo. Ngationgororei imwe neimwe:
1 Yakavharwa skrini
2 IPhone X pamba skrini
3 Kudzora nzvimbo
Kana tave ne iPhone X yakakiyiwa isu tinoona iko kune mamwe madhivhosi anosiyana, zvine musoro, kubva kune apfuura mamodheru.
Kune rimwe divi tinoona kuti chinyorwa chatove kuzivikanwa "Dhinda bhatani rekutanga kuti uzarure" inopa nzira kuchinyorwa chitsva: «Slide kumusoro kuti uvhure». Uku ndiko kungave kushandurwa kwemavara ekutanga "Rova zvakasimba kuti uvhure".
Kune rimwe divi, akaverengerwa mapfupi maviri pasi pechiso. Kurutivi rworuboshwe tichawana mukana wakanangana neiyo tochi yemudziyo wedu, nepo kurudyi tichava nekugona kune iyo kamera. Isu tinorangarira kuti mumaPhones apfuura, kuti tiwane kamera isu taifanira kutsvedza kubva kurudyi kuenda kuruboshwe kuti tiwane iyo pasina kuzarura mudziyo.
IPhone X pamba skrini
Iyo itsva iPhone X yakanyatsogadzirisa zvachose yayo Dock, sezvazvakaitika mune nyowani iPad ine iOS 11. Iyi nyowani Doko inopa. dhizaini ine makona akakomberedzwa uye kuyangarara paine kamukana kadiki pakati pemicheto yechigadzirwa.
Sezvazvaive zvakaita neshanduro yayo yapfuura, zvinongotibvumidza isu kuisa iyo kunonyanyisa kwemana mafomu. Pamusoro peiyi Doko, isu tinoramba tichiona machena machena ayo anoreva kuchiratidziro chatiri.
Chimwe chinhu chitsva chatichawana mune ino nyowani Apple chigadzirwa ndechekuti pazasi peDock chete, tinogona kuona bhaa rakatetepa izvo zvichatigonesa simuka kuita mamwe mabasa, kusanganisira vhara mafomu.
Zvisingashamisi, nekutora mukana uzere wekuratidzira pane ino kifaa, iyo control Center yakamanikidzwa kuchinja chinzvimbo chayo. Zvino, neiyo iPhone X, isu tichafanirwa kutsvedza kubva kumusoro kuti tikwanise kuona dzakasiyana sarudzo kana mabhatani ayo anotidzora nzvimbo anotipa.
Kusvika ikozvino mukona yekumusoro kuruboshwe taigona kuona iyo kugovera zvataive nazvo uye zita remushandi wedupamwe nehunhu hwekubatana WiFi, payakabatanidzwa.
Mukona yekumusoro kurudyi taigona kuona data senge bateri, iyo icon ye MAKARALI USBla alarm alarm kana the kiya kutenderera chidzitiro. Uye pakati, iyo gomo.
Nechi skrini chitsva chakagadzirwazve neApple, iyi bar yakaitika shanduko, sezvatinoona mumufananidzo unotevera.
Sekuziva kwatakakwanisa kuona, iyo gomo yaizopurukira kukona yepamusoro yekuruboshwe, nepo mifananidzo iri pa bateri, WiFi uye kufukidzwa vanozochinja mativi, vakamira mukona yekumusoro kurudyi.
Kana iwe ukatarisa pamufananidzo, iyo nzvimbo ishoma kwazvo saka mamwe maidhoni akadai seBluetooth, data kubva kuna opareta kana alarm inowoneka riini tinotsvedza kubva kumusoro, se yakanyanya kuzara status bar uye neaya data asingakwanise kuratidzwa nekukasira kana isu tiri pachiratidziro chemumba kana mune chero chimwe chirongwa pamwe nemamwe mabhatani eanodzora nzvimbo.
Sezvatinogona kuona, dhizaini shanduko yeiyi nyowani iPhone X ndeye kudziya kwemusoro kune vanogadzira maapp, sezvo yekumusoro tebhu yakaiswa pakati pechigadzirwa inokonzeresa kuona kwemaapps kuti ade a kuedza kukuru uye zvakasiyana zvachose neiya yakamboshandisirwa shanduro dzekare dze iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Isu tinoziva zvimwe zvakawanda nezve iyo iPhone X interface
Parker ibhebhi teddy inodzidzisa vana vachishandisa ARKit
Iyo Yahoo hack yakabata ese maakaunzi iyo kambani yaive nayo muna2013